प्राकृतिक विपतलार्इ ध्यान दिँदै डा. केसीको अनशन स्थगित | NepaleKhabar.com
प्राकृतिक विपतलार्इ ध्यान दिँदै डा. केसीको अनशन स्थगित
काठमाडौँ, साउन ३१ गते । बाढीपहिरोका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएकाले देशको वर्तमान संकटलाई ध्यानमा राख्दै अनशन स्थगित गरेको डा. केसीले जनाएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा डा. केसीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति बाचन गरिएको थियो ।
विज्ञप्तिमा वर्तमानको संकट समाधान हुने बित्तिकै पुनः अनशन सुरु गर्ने जनाइएको छ । डा. केसीले आफ्ना माग पूरा गर्न पुनः आग्रह गरेका छन् । लगातारको वर्षाका कारण देशमा उत्पन्न परिस्थितिले सम्पूर्ण चिकित्सकहरू कार्यक्षेत्रमा खटिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि डा. केसीले अनशन स्थगित गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा समेत बाढीपहिरोले उत्पन्न विपत्को अवस्थामा सम्पूर्ण चिकित्सकहरू उपचारमा लाग्नुपरेकाले देशको संकटलाई ध्यान दिँदै अनशन स्थगित गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
आफू कसैसँग झुकेको नभई नागरिकको पक्षमा निर्णय गरेको भन्दै विज्ञप्तिमार्फत् डा. केसीले विपत् सकिएपछि पुनः अनशन गर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
डा. केसीले अनसन स्थगित गर्नुअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उनको माग सम्बोधनमा केही निर्णय गरेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजको सिट र शुल्क निर्धारणको अधिकार आईओएममा फिर्ता गरेको छ । ‘सिट र शुल्क निर्धारणका सम्वन्धमा आईओएमले जे सिफारिस गर्छ, त्यो सिनेटमा लैजान्छौं भनेर डिनलाई लेखी पठाएको छु, त्रिवि उपकुलपति तिर्थ खनियाले अनलाइनखबरलाई बताए ।
साथै आईओएमको स्वायत्ततासम्वन्ध अध्ययन गरेर सुझाव दिन गठन भएको कार्यदलले दिएको रिपोर्ट पनि त्रिवि सिनेटमा पेश गर्ने बचन खनियाले दिएका छन् ।